Falal ammaan darro oo 24-kii saac ee ugu dambeeyey ka dhacay gobolka Mudug iyo cabsi colaadeed oo abuurantay. – Radio Daljir
Falal ammaan darro oo 24-kii saac ee ugu dambeeyey ka dhacay gobolka Mudug iyo cabsi colaadeed oo abuurantay.
Febraayo 10, 2012 12:00 b 0
Galkacyo, Feb 10 ? Dhacdooyin isku xig-xigay oo dhan ka ah dhinaca nabadgalyada ayaa 24-kii saac ee ugu dambeeyey ka dhacday deegaanno kala duwan oo ka tirsan gobolka Mudug, kuwaasi oo dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Dhicitaanka dhibahaasi ammaan darro, waxaa ay abuureen cabsi colaadeed oo ka dhex aloosantay dadyawga gobolka deggan ee ku kala abtirsada maamullada Puntland iyo Galmudug, kuwaasi oo muddo lahaa xiniftan daaqa iyo deegaanka ku salaysan, inkastoo daba ka soo riixid siyaasadeed la tuhmo.
Deegaanno badan oo u dhaxeeya Galkacyo iyo Jarriiban ayaa laga soo sheegayaa xiisado colaadeed iyo hub aruursi labada dhinaca, iyadoo xiriiro kala duwan oo aan la samaynay dadka deegaannadaasi ay noo sheegeen markasta in la filan karo isku-dhac colaadeed.
Mushkiladda colaadeed ee haatan ka soo cusboonaatay gobolka ayaa unkantay kaddib markii xalay mellayshiyaad hubaysan oo ka soo jeeda Galmudug ay jid-gooyo dhigteen meel wax yar u jirta tuulada Ceel-bardaale oo hoos timaada Galkacyo, iyagoo halkaasi ku dilay labo nin labo kalena ku dhaawacay kaddib markii ay tacshiirad qabadsiiyeen gaari safar ah oo ku sii jeeday dhinaca Jarriiban.
Dhimashada iyo dhaawaca raggaasi ayaa goor dambe oo xalay ahayd la soo gaarsiiyey Galkacyo, iyadoo gaari ay wateenna rasaastaasi ay halakaysay sida saraakiil gobolka ahi Radio Daljir u xaqiijiyeen.
Dhacdadaasi jidgalka ah ee dhimashada iyo dhaawaca keentay, waxaa ku xigtay dhacdo kale oo iyana saaka lagu weeraray hotel ku yaallada xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo taasoo daba-socotay dhacdadii xalay ee Ceel-bardaale.
Isla barqanimadii maantana dhacdo kale oo la xiriirta jidgooyadii xalay, ayaa ka dhacday tuulada Jillable oo ka mid ah deegaannada hoosyimaada maamulka Galmudug, taasoo ahayd weerar rag hubaysani ay ku qaadeen tuuladaasi, kaasoo dhaliyey khsaare dhimasho iyo dhaawacba iskugu jira.
Warar kale duwan ayaa ka soo baxaya baaxadda khasaare ee weerarkaasi Jillable ka dhalatay, waxaana wararka qaar tilmaamayaa in 5 qof halkaasi lagu dilay, tiro kalena dhaawac soo gaaray, inkastoo ay jiraan warbixinno kale oo tirada dhimashada intaasi ka badinaya, waxaana sidoo kale la sheegay in la waxyeelleeyey ceelkii tuuladaasi ay la hayd.
Dhacdooyinkaasi xiriirka ah ee illaa xalay dhacay, waxaa ay kiciyeen hurgumo colaadeed iyo dhiillo isi soo taraysa, iyadoo laga cabsi qabo dhicitaanka dagaal ka fool ka fool ah, waxaana dhinaca kale illaa maanta soo baxayey cambaarayn iyo dareen ka xumaansho oo lagu haaraamayey falalkaasi ammaan darro.
Bari: Tahriibayaal geeriyooday iyo kuwo kale oo la badbaadiyay
Baahin: Khamiis, Feb 09, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Daruuro colaadeed oo dul hoganaya gobolka Cayn; Cuqaasha gobolka Cayn oo ugu baaqay Somaliland in ay joojiso gulufka colaadeed, kalana baxdo ciidamadeeda gobolka; M/weyne Siilaayo oo xilalkii ka qaaday Taliyihii & Abaanduulkii ciidanka Somaliland; Heshiis laga gaaray iska-horimaadkii ka dhacay xaafada Horumar ee koonfurta Galkacyo.